Archive du 20181109
Marc Ravalomanana Miantso ny vahoaka ho eny Ambohijatovo
Miantso sy manentana ny vahoaka Malagasy ho avy etsy amin’ny Kianjan’Ambohijatovo ny kandida Marc Ravalomanana rahampitso sabotsy 10 novambra manomboka amin’ny 2 ora tolakandro.
CENI Madagascar Miantso ireo ka ndidà tsy hamoaka voka-pifidianana
Manoloana ny famoahana vokatra miainga avy amin`ny foiben`ireo kandidà izay tena miteraka resabe dia nanao antso avo ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana.
Voka-pifidianana avoakan’ny CENI Mandalo fanaraha-maso hentitra
Amin`ny ankapobeny, mbola vokatra vomjimaika izay azo teo anivon`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) ka ampaham-bokatra raha ny biraom-pandatsaham-bato no hasian-teny.
Resa-bola be hanakorontanana fifidianana Fanosoram-potaka tanteraka, hoy i Guy Laurent Ramanankamonjy
Niniana naparitaka tao amin’ny tambajotra fesiboky ny resaka milaza fa nandray vola tany amin'ny kandida iray hanova ny voka-pifidianana mandeha amin'ny TVM sy ny RNM ny olom-panjakana ambony maromaro.
Tabera Randriamanantsoa « Misy haino aman-jery manasa atidoha fotsiny ! »
Niteraka resabe ny voka-pifidianana ho filoham-pirenena nanomboka nivoaka tamin’ireo haino aman-jery isan-karazany nanomboka ny alarobia alina taorian’ny fandatsaham-bato. Samy nanana ny tarehimarika navoakany izy ireny.
Mampitandrina ny KMMR Misy fetrany ny fandeferana
Nanao fanambarana ny teo anivon’ny KMMR na ny Komity Mpanohana an’i Marc Ravalomanana, tamin’ny alalan’ny Talen’ny Fampielezan-kevitra Tsehenoarisoa Rabenja omaly noho ny fanambarana hafahafa ataon’ny kandida milaza tena sy mitonon-tena ho mpandresy.
Fanangonana voka-pifidianana Efa lasa lavitra ny any amin’ny “QG”-n’ny kandida
Mampitaintaina ny mpanara-dia ny kandida tsirairay, indrindra ireo kandida mitarika ao anatin’ny vokatra vonjimaika ny mety ho voka-pifidianana hiseho eo.
Akon’ny fifidianana filoham-pirenena Nisy ny tsy fahatomombanana
Vita ihany ny fifidianana fihodinana voalohany teto Madagasikara izay nandrasan’ny Malagasy.
James Ratsima Hitory ireo karana namatsy vola ny fanonganam-panjakana
Hitory ireo karana namatsy vola tamin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009 Atoa James Ratsima, filohan’ny antoko hasandratro ny fireneko.
Tompon’andraikitra tsy naha tomombana ny fifidianana Antsoinay hiala, hoy ny ABA
Hisaorana ny Malagasy rehetra nanatanteraka ny fifidianana tao anatin’ny fo tony sy firahalahiana tanteraka, hoy ny filohan’ny antoko politika Antokom-Bahoaka malagasy (ABA), Dani Rakotoson.
Ireny olona ireny !
Miarahaba anao aho ry Jean ! Tanana zatra mitsotra tokoa angaha ka sarotra avokona e !
Rivodoza Alcide Tsy misy ahiana amin’ny toetr’andro eto an-drenivohitra
Tsy ahiana hisy fiantraikany amin’ny toetr’andro eto Antananarivo Renivohitra ny fisian’ilay rivodoza Alcide any amin’ny 450 km avaratra atsinanan’Antsiranana, omaly folakandro.
Toran-kovitra sy mandrovi-tsihy
Miandry am-pitoniana izay ho voka-pifidianana ny rehetra ankehitriny. Miandry na eo aza ireo mafana fo mampiaka-peo eo anatrehan’ny zavatra hitany fa tsy nety sy tsy rariny.
Fiatrehana ny fidiran’ny mpianatra Voatery midi-trosa ny ankamaroan’ny ray aman-dreny
Mbola tafiditra tanteraka ao anatin’ny fiatrehana ny fidiran’ny mpianatra isika ankehitriny. Amin’ny herinandro ho avy io mantsy vao hiditra amim-pomba ofisialy avokoa ireo mpianatra eny anivon’ny sekolim-panjakana raha efa niditra tamin’ny volana septambra sy oktobra kosa ny ankamaroan’ireo sekoly tsy miankina.
Fanamiana miaramila tena izy sarona tao amin’ny jiolahy iray izay nosamborin’ny FIP tao Toamasina.
Mahasorena ireo mpanara-baovao ny manaraka ny fomba fanangonan’ny avy eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana ny voka-pifidianana, raha ny fanadihadiana natao tamin’ireo olom-pirenena vitsivitsy.
Hain-trano teny Anosibe Efatra namoy ny ainy, roa naratra mafy
Nitrangana hain-trano goavana tao amin’ny fokontany Anosibe andrefana I Boriborintany fahefatra ny alin’ny alarobia 7 novambra 2018 lasa teo , tokony ho tamin’ny 11 sy sasany alina.